Semalt विशेषज्ञ: SEO प्रदर्शनको मूल्यांकन कसरी गर्ने
धेरै जसो ई-वाणिज्य प्रबन्धकहरू रैंकिंगको साथ ग्रस्त छन्। तिनीहरू सँधै गुगलमा केहि खोजीको लागि खोजिरहेका हुन्छन् कि तिनीहरूको श्रेणीकरण राम्रो हुँदै गइरहेको छ। जब तिनीहरूले खोजी ईन्जिन नतीजाहरूमा परिवर्तनहरू देख्छन्, तिनीहरूले ती खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) कार्यक्रमको प्रदर्शन निर्दोष छ भनेर विश्वास गर्छन्। दुर्भाग्यवस, यो सधैं सत्य हुँदैन।
फ्रेंक Abagnale, Semalt डिजिटल सेवाहरु का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, वास्तविक कारक बताउँछ कि तपाइँको वेबसाइट को रैंकिंग र प्रदर्शन को प्रभावित।
प्रतिस्पर्धा: रँकि is के हो र?
आजकल प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धीहरु द्वारा प्रयोग परम्परागत जैविक खोज रणनीतिहरु लाई बढाएको छ। प्रत्येक इ-वाणिज्य कम्पनी मालिकले दृश्यता सुधार गर्न, क्लिक प्राप्त गर्न र बिक्री गर्न क्रममा साइटलाई उनीहरूको ब्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ। यद्यपि, प्रायः खोज प्रश्नहरूले खोजी परिणामहरूमा तत्वहरू सेट गर्दछन् जुन परम्परागत कार्बनिक परिणामहरूबाट ध्यान हटाउँदछ र पृष्ठ तल सूचीकृत गर्दछ।
निजीकरण: को क्रममा छ?
आज, र्याs्कि highly एकदम हदसम्म कस्टमाइज गरिएको छ कि अधिक खोजीको लागि अब प्रतिरूपणात्मक दर्जा छैन। साधारणतया, उपभोक्ताले आफ्नो आईफोनमा देख्ने श्रेणी निर्धारणहरू तपाईको ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा देख्ने स्तर निर्धारण भन्दा फरक हुनेछ। नतिजाको रूपमा, कसैले पनि कहिले निश्चितताका साथ भन्न सक्दैन "हामी Google मा प्रथम क्रममा छौं!"
सामान्यतया, दर्जा निर्धारण मा आधारित अनुकूलित गरीन्छ:
स्थान। यो सब भन्दा साधारण कारक हो जुन श्रेणीकरण को निजीकरण को प्रभावित गर्दछ। जब खोज इन्जिनहरूले सेल संकेत वा उपकरणको आईपी ठेगाना प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताको स्थान निर्धारण गर्छन्, ती अनुकूलित खोज परिणामहरू दिन्छन्।
उपकरण उपयोग। स्मार्टफोनमा देखा पर्ने श्रेणीहरू डेस्कटप वा ट्याब्लेटमा देखा पर्दा उस्तै हुँदैनन्। मोबाइल उपकरणहरूले अनुप्रयोगमा लि into्कहरू लिन्छन्। नतिजाको रूपमा, मोबाइल-मैत्री अनुभवको साथ साइटहरू उच्च श्रेणीको हुनेछ। यदि उपभोक्ताले आईफोनमा केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, परिणामहरू तपाईंको डेस्कटप परिणामहरूमा देखा पर्ने भन्दा धेरै फरक हुनेछ।
ईतिहास खोज्नुहोस् प्रत्येक चोटि जब तपाइँ खोजी ईन्जिनको खातामा लग इन गर्नुहुन्छ, खोजी इञ्जिनले तपाइँको सबै खोजी ईतिहासमा पहुँच पुर्‍याउँछ। उत्तम उदाहरण यो हो जब तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा जीमेल खातामा लग ईन गर्नुहुन्छ, खोजी ईन्जिनले तपाईंको गुगल खाता र गुगल खोजीमा लग इन गर्दछ। यो जानकारी तपाईंको उपकरणमा देखा पर्ने खोज परिणामहरू अनुकूलित गर्न प्रयोग गरियो।
सामाजिक व्यवहार। ट्विटर र Google+ जस्ता प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर, गुगलले तपाईंको सामाजिक व्यवहारमा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्दछ। यो वर्णन किन किन ब्रान्ड वा साथीहरूबाट केही सामग्री तपाईंको खोजी परिणामहरूमा प्रदर्शित हुन्छ, तर अन्य व्यक्तिले खोज प्रश्नहरूको थालनी गर्दा देखा पर्दैन।
जनसांख्यिकी खोजी ईन्जिनहरूले प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई डेमोग्राफिक समूहमा राख्छन् उनीहरूको बितेको व्यवहारको प्रयोग गरी अत्यधिक लक्षित विज्ञापनहरू डेलिभर गर्न।
माथि दिइएका कारकहरूमा आधारित, अब तपाईं बुझ्नुहुन्छ कसरी खोज इञ्जिन परिणामहरू अनुकूलित गरियो। यी कारकहरूले किन र्यान्किंग रिपोर्ट उपकरणहरू उपभोक्ताको लागि प्रतिरूपण डेटा फिर्ता हुने सम्भावनाको पूर्वावलोकन दिन्छ जब तपाईंको क्रमबद्ध उपकरणहरूले संकेत गर्दछ कि तपाईं तपाईंको सबैभन्दा बहुमूल्य कुञ्जीशब्दको लागि पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ। एक सम्भावनाले उनीहरूको अन्त्यबाट उस्तै परिणामहरू देख्न सक्दैन जसको मतलब तिनीहरू तपाईबाट किन्ने छैन। यसको मतलब यदि रैंक रिपोर्टि reporting उपकरणले तपाईको व्यवसायलाई आय आर्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सटीक डेटा दिन सक्दैन भने, तब यो प्रदर्शनलाई संकेत गर्न भरपर्दो उपकरण होईन।
प्रतिनिधित्व: कुन खोजशब्द छनौट गर्न?
ट्र्याकिंग रेटिंगिsको मतलब तपाई वाक्यांश र कुञ्जी शब्दहरूको सेट छान्नुहुन्छ जुन तपाइँ शब्दहरूको लागि श्रेणीकरणमा तपाइँको साइटको प्रदर्शनको लागि रँक गर्न र प्लट गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंले छनौट गर्नुहुने वाक्यांशहरूले तपाईंको प्रदर्शनको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
धेरै जसो कम्पनीहरूले वाक्यांशहरू र कीवर्डहरू प्रयोग गर्न सजिलो पाउँदछन् जुन उनीहरू पहिले नै कम प्रतिस्पर्धाको साथ आफ्नो ब्रान्ड वा शब्दहरू समावेश गरीरहेको छ। यसले प्राय: यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूको एसईओ प्रदर्शन निर्दोष छ भने पनि नभए पनि।
अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत पृष्ठहरू धेरै थोरै मागको साथ हजारौं वाक्यांशहरूको लागि श्रेणीकरण गर्न सक्दछ। यो धेरै खोजशब्दहरूको अवधारणामा आधारित छ जुन १, 1,,१15 वा ches० खोजी मासिक प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन सबै ट्र्याफिकमा थप जोडिन्छ उच्च-मूल्यवान कुञ्जी शव्दहरूको तुलनामा जुन तपाईं आफ्नो रिपोर्टि ranking रिपोर्टमा ट्र्याक गर्नुहुन्छ। ट्र्याकिंग किवर्डहरूले तपाईले उच्च मूल्यको रूपमा लिने गरी लामा पुच्छरको खोजमा लुकेको सम्भाव्यतामा अन्धो पार्छ।
लौकिकता: यो कहिले क्रमबद्ध गरियो?
श्रेणीकरण एकदम तरल र स्वभाविक हो। नतिजाको रूपमा, तपाइँ तपाइँको मनपर्ने कुञ्जी शव्दहरू खोजी गर्न सक्नुहुन्छ र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि यो पहिले दर्ता हुँदैन। जे होस्, तपाईले अर्को पटक खोजी गर्दा यो रैंकिंग देखेर तपाईलाई रमाईलो आश्चर्य लाग्न सक्छ।